Ulawulo lwePropati Iintlawulo eziZenzekelayo | Iimpawu zeZeevou
Iimbonakalo » iintlawulo
Inkqubo yokuhlawula kukaZeevou ikuvumela ukuba ulawule iintlawulo zakho, ngaloo ndlela uphucule ukuhamba kwakho kwemali.
Siyayiqonda imingeni yakho ...
Ukuqokelela intlawulo yeendwendwe zokuhlala kwazo akukho lula. Ezinye iindawo zokudwelisa kunye Ii-OAs ukuqokelela intlawulo egameni lemikhosi. Ukuba kufuneka uyenze ngokwakho, kunokuba ngumthwalo. Ngelixa unokuqokelela iintlawulo ngogqithiso lwebhanki okanye ngemali ezinkozo, ingxaki yezolawulo enxulumene nayo ibalulekile. Eyona ndlela ilula yokwenza ukuba ingqokelela yeentlawulo isebenze ngokuzenzekelayo yikhadi lekhredithi / ledebhithi.
Uninzi lwababoneleli besoftware ababonelela ngokuqokelela iintlawulo egameni lababuki zincwadi ababhukisha abavela kwiindawo zomntu wesithathu. Booking.com, iya kuhlawulisa ngokuzenzekelayo iinkcukacha zekhadi ezingeniswe lundwendwe oluthunyelwe ngaphesheya kumphathi wejelo ngokudityaniswa kwe-API. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukuba umbuki zindwendwe akanakukuqinisekisa ukuba umnini wekhadi oyinyani uyayigunyazisa le ntengiselwano. Oku kubangela ukuhlawulwa kwakhona ngenxa yamakhadi abiweyo asetyenzisiweyo okanye amabango obuqhetseba abonwa lundwendwe.
Omnye umba obonisa umceli mngeni kubaphathi berente yeholide kukuqokelela intlawulo yokubhukisha ngqo okanye iinkonzo ezongezelelweyo. Ukugcina umkhondo wentlawulo eyenziweyo zezo ndwendwe kuwe okanye kwisitishi kwinqanaba lokubhukisha kuhlala kuyinkqubo yesandla.
ZingaNceda njani iiNtlawulo eziZenzekelayo zikaZeevou?
Inkqubo yeZeevou edityaniswe ngokupheleleyo yokuHanjiswa kweNkqubo yokuHanjiswa iyonke ilungelelanisa yonke inkqubo yokubhukisha. Unokuqiniseka ukuba yonke into ibikhathalelwe ngaphambi kokuba undwendwe lunikwe ukufikelela. I-Zeevou Pay ikunceda ugcine umkhondo wentlawulo, kwaye wenze ngokuzenzekelayo ukuqokelelwa kweentlawulo zokuhlala ngokwazo okanye naziphi na izongezo ezibhukishwe lundwendwe.
Njengengxenye yenkqubo yesiQinisekiso sokuBhukisha esiManyathelo ama-5, undwendwe luthunyelwa i-3-D ekhuselekileyo yeNtlawulo yeKhonkco. Oku kukuvumela ukuba uqokelele iintlawulo zokubhukisha eziza kwiindawo zangaphandle okanye kwiwebhusayithi yakho. Ngexesha lenkqubo yokuhlawula, ibhanki yomnini wekhadi iya kungqinisisa intengiselwano. Umnini wekhadi uqinisekisa ngendlela yegama eligqithisiweyo okanye ikhowudi eyimfihlo ethunyelwe kwinombolo yeselfowuni, ukuba i-3-D ekhuselekileyo iyasebenza. Ayingawo onke amakhadi afanelekileyo ukufumana i-3-D ekhuselekileyo. Uninzi ababoneleli bamasango ukusebenza nathi kuya kukuvumela ukuba usete amanqanaba ahlukeneyo eemfuno zokhuseleko ngokusekwe kwintengiselwano mali.
Inkqubo yeeNtlawulo eziZenzekelayo zikaZeevou ikwavumela ukuba ungene kwimirhumo ethathwe ngaphandle kwenkqubo ngemali, ngogqithiso lwebhanki, okanye ngomfundi wekhadi. Ungalayisha iinkcukacha zentengiselwano njengexesha elithathiweyo, isalathiso, kwaye ungeze isinamathiselo ukuba unqwenela. Ngelixa uZeevou ekuvumela ukuba uthathe intlawulo ngomnxeba, kuya kufuneka wenze njalo ukuba uyathemba undwendwe. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba abasebenzisi makhadi abiweyo okanye kunokwenzeka ukuba bakhuphe ukubuyisa.
Ukulungiselela ukuhlawulwa kokuhlala ixesha elide, unokhetho lokuvula i-invoyisi yeveki okanye yenyanga. Umjikelo ubalwa nokuba kususela kumhla wokuqala wokubhukisha okanye ekuqaleni kweveki / ngenyanga. Inxalenye yeKhonkco lokuHlawula lokuHlawula likuvumela ukuba uvelise ikhonkco lokuhlawula ukuze uqokelele intlawulo yenxalenye yokubhukisha. Oku kunokusetyenziswa ukuba abantu abaninzi bafuna ukwahlula iindleko zokubhukisha, okanye ukuba awufuni kuqokelela intlawulo ngaphambili.
Iimpawu ezinxulumene noko
← Uphawu lwangaphambili
Uphawu olulandelayo →